Wasiir ka tirsan xukuumadda Puntland oo hortegay baarlamaanka
GAROWE, Puntland – Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda dowladda Puntland, Maxamed Cabdi Cismaan [Majiino], ayaa Arbacada maanta ah wuxuu hortegay mudaneyaasha baarlamaanka.
Fadhigaan ay soo xaadireen 44 xubnood ayaa waxaa u dhamaa shir-gudoonka – Afhayeenka iyo labadiisa ku xigeen – Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, Cabdicasiis Cabdullahi Cusmaan iyo Ismaaciil Maxamed Warsame.
Ajendaha kulankaan ka qabsoomay xarunta golaha ee Garowe wuxuu ahaa; dib-u eegista heshiiska shirkada DP World ee Dekadda Boosaaso.
Xildhibaanadda ayaa fursad u helay in ay su'aallaan wasiirka, kaasoo ka jawaabay waydiimaha kaga yimid mudaneyaasha fursada helay.
Bishii June ee sanadkii hore 2019-kii ayay ahayd markii baarlamaanka Puntland ansixiyey dib u eegista heshiiskan uu April, 2017-kii saxiixay madaxweynihii hore ee Puntland, Dr Cabdiwali Maxamed Cali [Gaas].
Dhanka shirkaddan laga leeyahay Imaaraadka Carabta waxaa heshiiska qalinka ugu duugay maamule Suldaan Axmed Bin Suleyman.
Iyaddoo mashruuca loo qoondeeyay 336 milyan oo Doolar, nuxurka heshiiskaas ayaa wuxuu ahaa balaarinta iyo casriyeynta marsadda.
Bishii July ee 2017-kii ayuu meelmariyey baarlamaankii ka horeeyay kan waqti xaadirkan shaqeynaya, balse tirro mudaneyaal ah waxay soo jeediyeen in dib loogu noqdo maadaama uusan wali fulin heshiiskaas.
Deni oo mas'uuliyiin u magacaabey wasaaradaha Tamarta iyo Dastuurka
Puntland 08.07.2019. 12:34
Tani ayaa qeyb ka ah isku shaadheyn lagu sameynayo wasaaradaha dowladda.
Gudoomiyihii maxkamada sare Puntland oo ku dhintay Turkiga
Puntland 23.06.2019. 19:14
Puntland oo wada qorshe lagu yareynayo kufsiga iyo xagjirnimada
Puntland 23.05.2019. 14:04
Saddex kamida dadkii loo haystay Kufsiga Caa'isha oo dil lagu xukumay
Puntland 12.05.2019. 11:55
Maamulada oo is-dhaafsanaya ragga dambiyada geysta ee baxsadka ah
Puntland 07.05.2019. 21:13
Puntland oo xukuntay shaqsiyaad lagu eedeeyay argagixisanimo
Puntland 26.09.2020. 20:30
Maxaa keenay baaqashada shirkii uu Farmaajo isugu yeeray maamulada?
Soomaliya 20.04.2019. 06:22